Iimpembelelo zoqoqosho kwiZiphumo zoMongameli zikaMongameli
Ubuninzi bunjani Uqoqosho oluchaphazela iziPhumo zoMongameli?
Kubonakala ngathi ngexesha lonyaka lonyulo lonongameli sitsho ukuba imisebenzi kunye noqoqosho kuya kuba yimiba ephambili. Ngokuqhelekileyo kucinga ukuba umongameli ongenamdla akanakukhathazeka ukuba ngaba uqoqosho luhle kwaye kukho imisebenzi emininzi. Ukuba ngaba kunjalo, kunjalo, umongameli kufuneka alungiselele ubomi kwi-yenkukhu yenkukhu yeerubha.
Ukuvavanya Ubulumko obuqhelekileyo bokukhethwa koMongameli kunye noQoqosho
Ndagqiba kwelokuba ndihlolisise ubulumko obuqhelekileyo ukuba ndibone ukuba ngaba yinyani kwaye ibone oko kunokusixelela malunga nokhetho lonyulo lukazwelonke.
Ukususela ngowe-1948, kubekho unyulo luka-9 lwengameli oluye lwafaka umongameli ongenamdla ngokuchasene nomchasi. Kulezo zithoba, ndakhetha ukuhlolisisa ukhetho lwesithandathu. Ndagqiba kwelokuba ndiwubhoxise ababini bolu lonyulo apho ummngcipheko wayecingwa kakhulu kunokuba akhethwe: uBarry Goldwater ngo-1964 noGeorge S. McGovern ngo-1972. Kulo lonyulo lukaMongameli olusalayo, abameli bawunyulo lwamaqela amane ngelixa abatshabalala bephumelele abathathu.
Ukubona ukuba yimpembelelo yomsebenzi kunye noqoqosho lube nolonyulo, siya kuqwalasela izibonakaliso ezimbini ezibalulekileyo zoqoqosho : izinga lokukhula kwe-GNP yangempela (uqoqosho) kunye nenani lokungasebenzi (imisebenzi). Siza kuqhathanisa iminyaka emibini ngokumalunga neminyaka emine kunye neminyaka edlulileyo yokusebenza kwezi zintlukwano ukwenzela ukuthelekisa indlela "Imisebenzi & noQoqosho" eyenziwa ngayo ngethuba lika-kamongameli kunye nokuba lenziwa njani ngokumalunga nolawulo lwangaphambili. Okokuqala, siza kujonga ukusebenza kwe "Imisebenzi & noQoqosho" kwiimeko ezintathu ezithintekayo.
Qinisekisa ukuba uqhubeke kwi "Ukhetho lukaMongameli kunye noQoqosho."
Kulookhetho lwethu luka-6 olukhethiweyo longameli, sinezo zintathu apho uphumeleleyo. Siza kujonga abo bathathu, ngokuqala ngepesenteji yevoti yokuvota ngamnye umviwa oqokelelweyo.
1956 Ukhetho: Eisenhower (57.4%) v. UStevenson (42.0%)
Ukukhula kwe-GNP yangempela (Uqoqosho) Izinga lokungasebenzi (Imisebenzi)
Unyaka Ombini 4.54% 4.25%
Unyaka Omine 3.25% 4.25%
Ulawulo Lwangaphambili 4.95% 4.36%
Nangona i- Eisenhower iphumelele kwihlabathi, uqoqosho luyenze lube ngcono ngaphantsi kolawulo lukaTuruman kunokuba lwenziwa ngexesha lokuqala lika-Eisenhower.
I-GNP yangempela, nangona kunjalo, ikhule ngokumangalisayo 7.14% ngonyaka ngonyaka we-1955, owamnceda ngokuqinisekileyo u-Eisenhower ukuba aphinde ahlaziywe.
1984 Ukhetho: Reagan (58.8%) v. Mondale (40.6%)
Unyaka Ombini 5.85% 8.55%
Unyaka Omine 3.07% 8.58%
Ulawulo Lwangaphambili 3.28% 6.56%
Kwakhona, uReagan waphumelela kwi-landslide, ngokuqinisekileyo yayingenanto enxulumene nokubalwa kweengqesho. Uqoqosho lwaluphuma ngaphandle kwemali ngexesha lokubuyiswa kweReagan, njengoko i-GNP yangempela yanda i-7.19% kwiminyaka yokugqibela yekota kaReagan.
1996 Ukhetho: IClinton (49.2%) v. Dole (40.7%)
Unyaka Ombini 3.10% 5.99%
Unyaka Omine 3.22% 6.32%
Ulawulo Lwangaphambili 2.14% 5.60%
Ukukhethwa kwakhona kukaClinton kwakungekho mhlaba, kwaye sibona umzekelo ohlukileyo kunezinye iimbambano ezimbini. Lapha sibona ukukhula koqoqosho ngokuqhubekayo ngexesha lokuqala likaClinton njengoMongameli, kodwa kungekhona ukuphucula izinga lokungasebenzi.
Kuya kubonakala ukuba uqoqosho lukhulile kuqala, ngoko izinga lokungabikho kwemisebenzi linciphile, esiya kulindela ukususela kwisantya sokungabikho kwemisebenzi sisalathisi sokungena .
Ukuba sinqamle ukuphumelela ukuphumelela okuthathu, sibona iphethini elilandelayo:
Inzuzo (55.1%) v. Inselele (41.1%)
Unyaka Ombini 4.50% 6.26%
Unyaka Omine 3.18% 6.39%
Ulawulo Lwangaphambili 3.46% 5.51%
Kuza kubonakala ngoko kweso sampulu esincinci ukuba abavoti banomdla kakhulu kwindlela uqoqosho oluye lwaphucula ngayo ngexesha lobunzima bobuongameli kunokuba baqhathanise nokusebenza kolawulo langoku kunye nolawulo oludlulileyo.
Siza kubona ukuba le pateni inokwenene ukhetho oluthathu apho ilahlekile.
Ngoku kuba abathathu abaye balahleka:
Ngowe-1976 Ukhetho: I-Ford (48.0%) v. UCarter (50.1%)
Unyaka Ombini 2.57% 8.09%
Unyaka Omine 2.60% 6.69%
Ulawulo Lwangaphambili 2.98% 5.00%
Olu khetho aluqhelekanga ukuba luhlolisise, njengoko uGerald Ford ethathe isikhundla sikaRichard Nixon emva kokutyunjwa kukaNixon. Ukongezelela, siqhathanisa ukusebenza kweRiphabliki (iFransi) kwi-republican administration yangaphambili.
Ukujonga ezi zikhokelo zezoqoqosho, kulula ukubona isizathu sokuba ilahlekile. Uqoqosho lwaluyehla ngokukhawuleza ngeli xesha kwaye izinga lokungabikho kwemisebenzi liye lanyuka ngokukhawuleza. Ngenxa yokusebenza koqoqosho ngexesha lolawulo lweFransi, akumangalisi ukuba olu khetho lwalusondeleyo.
1980 Ukhetho: uCarter (41.0%) v. Reagan (50.7%)
Unyaka Ombini 1.47% 6.51%
Unyaka Omine 3.28% 6.56%
Ulawulo Lwangaphambili 2.60% 6.69%
Ngowe-1976, uJimmy Carter watshitshisa umongameli owayengumongameli. Ngowe-1980, wayengumongameli ophethwe ngumongameli. Kuya kubonakala ukuba isantya sokungabikho kwemisebenzi yayingenakunzima ukuphumelela kweRagan yokunqoba iCarter, njengoko izinga lokungasebenzi liphuculwe ngaphezu komongameli kaCarter. Nangona kunjalo, iminyaka emibili yokugqibela yolawulo lweCarter yabona uqoqosho lukhula ngo-1.47% ngonyaka. Ngama-1980 ukhetho lukaMongameli lubonisa ukuba ukukhula koqoqosho, kwaye kungekhona isantya sokungabikho kwemisebenzi, kunokuhlawula umntu ongenamsebenzi.
Ngo-1992 Ukhetho: Ibhitra (37.8%) v. Clinton (43.3%)
Unyaka Ombini 1.58% 6.22%
Unyaka Omine 2.14% 6.44%
Ulawulo Lwangaphambili 3.78% 7.80%
Olunye ukhetho olungavamile, njengoko siqhathanisa ukusebenza komongameli waseRiphabliki (Bush) kwenye i-republican administration (i-term yesibili yeReagan).
Umsebenzi oqinileyo womviwa wesithathu u- Ross Perot wabangela uBill Clinton ukuba anqobe ukhetho kunye ne-43.3% kuphela yevoti ethandwayo, inqanaba ngokuqhelekileyo linxulumene nomviwa olahlekileyo. Kodwa amaRiphablikhi abakholelwa ukuba ukutshatyalaliswa kweBhitter kulala kuphela kumahlombe kaRoss Perot kufuneka acinge kwakhona. Nangona izinga lokungabikho kwemisebenzi lancipha ngexesha lolawulo lukaBush, uqoqosho lwalukhula nge-1.58% ebudeni beminyaka emibili yokugqibela yolawulo lweBush. Uqoqosho lwaluhlehlisiwe kwiminyaka yokuqala yama-1990 kwaye abavoti bebakhuphazelekile.
Ukuba silinganisa ukulahlekelwa kweentlawulo ezintathu, sibona iphethini elilandelayo:
Imfanelo (42.3%) v. Inselele (48.0%)
Unyaka Ombini 1.87% 6.97%
Unyaka Omine 2.67% 6.56%
Ulawulo Lwangaphambili 3.12% 6.50%
Kwinqanaba lokugqibela, siza kuhlola ukukhula kwe-GNP ukukhula kunye nesantya sokungabikho kwemisebenzi phantsi kolawulo lukaGeorge W. Bush , ukubona ukuba izinto zezoqoqosho zanceda okanye zonakalisa amathuba okubuyisela iBush ngo-2004.
Makhe siqwalasele ukusebenza kwemisebenzi, njengoko kulinganiswa nenani lokungabikho kwemisebenzi, kunye noqoqosho njengoko lilinganiselwe kwisantya sokwanda kwe-GDP yangempela, phantsi kwekota yokuqala kaGeorge W. Bush njengomongameli. Ukusebenzisa idatha ukufikelela kunye nokuquka iinyanga ezintathu zokuqala zika-2004, siya kuqulunqa ukuthelekiswa kwethu. Okokuqala, izinga lokukhula kwe-GNP yangempela:
Ukukhula kwe-GNP Izinga lokungasebenzi
Ixesha lesi-2 leClinton 4.20% 4.40%
2004 (iKota yokuqala) 4.2% 5.63%
Iinyanga ezi-37 zokuqala phantsi kweB Bush 2.10% 5.51%
Siyabona ukuba ukukhula kwe-GNP yangempela kunye nesantya sokungabikho kwemisebenzi kwakubi kakhulu ngaphantsi kolawulo lweBush kunokuba bephantsi kweClinton kwikota yakhe yesibili njengoMongameli. Njengoko sikwazi ukubona kwi-statistics ye-GNP yokukhula kwamanani, izinga lokukhula kwe-GNP langempela liye landa ngokukhawuleza ukususela kwiminyaka emininzi ekuqaleni kweeminyaka, kanti isantya sokungabikho kwemisebenzi siyaqhubeka siba sibi kakhulu. Ngokujonga le mizila, sinokuqhathanisa nokusebenza komsebenzi kwimisebenzi kunye noqoqosho kwiintandathu esizibonayo:
Ukukhula koqoqosho oluphantsi kunokuba ulawulo lwangaphambili : Oku kwenzeka kumabini amabini apho u-Eisenhower, uReeagan kunye namacala amabini apho ilahlekile (Ford, Bush)
Uqoqosho luphuculwe kwiMinyaka emiBini edlulileyo : Oku kwenzeka kwiimeko ezimbini apho u-Eisenhower, uReeagan, kwaye akukho namnye apho apho umntu olahlekileyo.
Izinga eliphezulu lokungabikho kwengqesho ngaphezu koLawulo oluPhezulu : Oku kwenzeke kwiimeko ezimbini apho igosa elithintekayo (uRagag, Clinton) kunye necala elinye apho ilahleke khona (Ford).
Izinga eliphezulu lokungabikho kwengqesho kwiNyaka eLibini edlulileyo : Oku kwenzeka nakwezinye iimeko apho umntu ophumeleleyo. Kwimeko ye-Eisenhower kunye ne-Reagan yokuqala yexesha lokulawula, kwakungekho nantlukwano kwiminyaka emibili kunye nexesha elipheleleyo lokungabikho kwemisebenzi, ngoko kufuneka siqaphele ukuba singayifunde kakhulu kule nto. Oku kunjalo, kodwa kwenzeka kwimeko enye apho ilahlekile (Ford).
Nangona inokuthi ithandeke kwezinye iindidi ukuthelekisa ukusebenza koqoqosho ngaphantsi kwe-Bush Sr. Kwi-Bush Jr., ukugweba ngetshathi yethu, abanalo okufanayo. Ukwahluke kakhulu kukuthi uWash Bush wayenelungelo lokwenyuka kwemali yakhe ekuqaleni komongameli wakhe, ngelixa u-Bush ophezulu wayengenanhlanhla. Ukusebenza koqoqosho kubonakala kufaka phakathi kolawulo lweGerald Ford kunye nolawulo lokuqala loReagan.
Xa sicinga ukuba siphinde sandulela ukhetho lwango-2004, le datha yodwa yenze kube nzima ukuqikelela ukuba uGeorge W. Bush uza kugqiba "kwi-Incumbents Who Won" okanye "Abakhiweyo abalahlekileyo" ikholomu. Ngokuqinisekileyo, uBush waphela ekuphumeleleni ukubuyisela ukulungiswa kwemali nge-50.7% kuphela yevoti ku-48.3% kaJohn Kerry . Ekugqibeleni, lo msebenzi usishukumisela ukuba sikholwe ukuba ubulumko obuqhelekileyo-ngokukhethekileyo ukhetho lonyulo lukazwelonke kunye noqoqosho-aluyilo eliqilileyo lezinto ezikhethiweyo.
Isingeniso kuMyinge kunye neMveliso emfutshane
Iingelosi ze-Guardian zikhusela njani abantu?